M/Weyne Shariif oo sheegey in dalka ay ku soo duuleen Ajaaniib dalbadeyna Ciidammo nabad ilaalin ah. [Akhris …] – Radio Daljir
M/Weyne Shariif oo sheegey in dalka ay ku soo duuleen Ajaaniib dalbadeyna Ciidammo nabad ilaalin ah. [Akhris …]
Muqdisho, June 28- Madaxweyne Shariif Sh Axmed ayaa sheegey in dalka Soomaaliya ay ku soo duuleen Argagixiso Caalami ah ku waas oo doonaya ayuu yiri in ay ka hor joogsadaan Shacabka Soomaaliyeed nabadda iyaga oo bur burinaya qaranka Soomaaliyeed.
Shariif Sh Axmed waxaa uu sheegey in qorshaha kooxahaasi ay yihiin in aysan sal dhigan dawladda uu Madaxweynaha u yahay.
Waxaa uu sheegey Shariif Sh Axmed in dawladdiisii muddadii ay dalka ku sugnayd haysayna xilka in ay waxyaabo badan ay hirgelisey, waxaana uu sheegey in ay waxyaabahaasi ka mid yihiin ku dhaqanka Shareecada Islaamka waa sida uu hadalka u dhigaye.
Waxaa kale oo uu sheegey waxyaabihii ay qabatey dawladda in uu ka mid yahay Mushahar siinta Ciidamada Qalabka sida ee dawladda KMG ee Soomaaliya, iyo dhisidda laamaha dawladda.
Madaxweynaha DFKMG ee Soomaaliya Shariif Sh Axmed ayaa sidoo kale Shirkiisa jaraa?id waxaa uu shaaca uga qaadey in dagaallada uu ku hayo Xasan Daahir Aweys DFKMG ay yihiin kuwo ay la soo qorsheynayaan saraakiil u dhalatey dalka Eritrea.
Isla xilligii uu qabanayey Shirka jaraa?id ayaa waxaa ka soconayey magaalada Muqdisho daggaallo u dhaxeeya Ciidamada daawladda iyo kooxaha ka soo horjeeda waxaana la maqlayey Madaafiic ay labada dhinac is dhaafsanayeen ku waas oo qeyb ka mid ah lagaba tuurayey isla gudaha Madaxtooyada.
Madaxweyne Shariif waxaa uu ku dheeraadey xaaladda dalka uu haatan marayo waxaana uu sheegey in dalka ay ku soo duuleen kooxo uu ku tilmaamey Al Qaacida ka timid Asia isla markaana diiddan qarannimada dalka Soomaaliya.
Waxaa uu Tacsi uu u direy qoysaskii ay ka baxeen Askartii ku geeriyyootey dagaalladii ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana uu sheegey in ay la dagaallameen Argagixiso iyo kooxo ku soo duuley dalka Soomaaliya.
Shariif Sh Axmed ayaa Mahad celin u direy ciidamada AMISOM isaga oo sidoo kale ugu baaqey waddamada Afrika in ay soo dhammeystiraan ciidamada nabad ilaalinta ee ay horey ugu yabooheen dawladda KMG ee Soomaaliya.
Waxaa uu difaacay doorka ay ku leeyihiin dalka Soomaaliya ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM waxaana uu sheegey in ujeeddadoodu aysan ahayn in ay duqeyn u geystaan rayadka, hase ahaatee ay doonayaan in ay ka qeeyb qaataan hawlaha nabad ilaalinta ee dalka Soomaaliya loona baahanyahay in la soo dhammeystiro tiarada ka dhimman si loo dajiyo xaaladda dalka oo haatan ah mid aan sallahayn.
Farxaan Jeemis Cabdulle.